बन प्रमाणिकरणकालागि प्रारम्भिक अध्ययन – Pahilo Page
अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रमाणिकरण गर्नकालागि दाङका दुई वटा सामुदायीक बनमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ । नेपाल र भारतका बन विज्ञहरुको टोलीले मंगलबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्रका दुई वटा सामुदायीक बनहरुमा स्थलगत अध्ययन गरेको हो ।
बन प्रमाणिकरण विज्ञ एके बर्माको नेतृत्वमा रहेको टोलीले वडा नं. ७ को श्री गणेश सामुदायीक बन उपभोक्ता समूह र वडा नं. ९ को नवदुर्गा सामुदायीक बन उपभोक्ता समूहको अध्ययन अवलोकन गरेको हो । सो टोलीले बन उपभोक्ता समूहका पदाधीकारी र उपभोक्ता सँग अन्र्तक्रिया गर्नुका साथै बनको अध्ययन अवलोकन गरेको छ ।
सो क्रममा टोलीले बन प्रमाणिकरणका सिद्धान्त, मापदण्ड र सुचकहरुका बिषयमा जानकारी गराएको थियो । यस्तै ग्रिन फाउण्डेशन नेपालले तयार पारेको बन प्रमाणिकरण सिद्धान्तको मस्यौदा दस्तावेजका बिषयमा पछि छलफल भएको थियो । छलफलमा सामुदायीक बनका पदाधीकारी र उपभोक्ताहरुले आफूहरु बन प्रमाणिकरणको मापदण्ड पूरा गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
दुई वटा सामुदायीक बनहरुको अध्ययन पछि टोलीले मंगलबार नै यहाँका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरुले पनि यहाँका दुई वटा सामुदायीक बनलाई प्रमाणिकरणको परिक्षणका रुपमा अगाडी बढाउन सकारात्मक भएको बताएका थिए ।
सो क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले सामुदायीक बनलाई संरक्षण गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै बनलाई स्वस्थ्य राख्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बनलाई स्वस्थ्य राख्नकालागि प्रमाणिकरणका सिद्धान्त र मापदण्डको अनुसरण गर्नुपर्ने बताए ।
टोलीमा भारतीय वाताबरण विद् तरुणा मिश्र, बन मन्त्रालयका उपसचिव बिष्णु आचार्य, पूर्व सहसचिव कृष्ण प्रसाद पोख्रेल, बन प्राविधिक संघका सदस्य लिलाराज पौडेल, नेपाल हस्तकला महासंघका उपाध्यक्ष रत्नेश्वरी श्रेष्ठ, ग्रिन फाउण्डेशनका अधिकृत अर्जुन चापागाँई रहेका थिए ।
प्रकाशित मिति : मङ्गलवार, साउन ०१, २०७५ समय : १८:४८:४७ 192 पटक पढिएको